2017 March - All Things Myanmar Burmese
Phone cards to Myanmar
An Online Myanmar Friendship & Dating Community
Dance for Life Party by Zune Thizar, Zar Zar Htet & Kabyar Ko Ko
ဇွန်သဉ္ဇာ၊ ဇာဇာထက်နဲ့ ကဗျာကိုကို တို့ ပါဝင်ဖျော်ဖြေသည့် Dance for Life Party ကို ယခုလ
General Aung San’s Biography
General Aung San’s Biography, edited by Thakhin Ko Taw Mine, is a
Mommy dog and little puppies
Dogs are not onlyaman’s best friend, they are also the
Myanmar Beauties (Wine Sun Khine Thein and Myo Thwet Thwet Ko)
Although the above photos might appear
Fishy Tayzar Linn
Mister Asia Myanmar 2016 ပြိုင်ပွဲမှ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု Mister မောင်တေဇလင်းအနေဖြင့် စင်သီတာနော့ အား လိမ်လည်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် 22.3.2017 ဝါးဝါး (မြစ်မခ) Mister Asia Myanmar 2016 ပြိုင်ပွဲမှ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု Mister မောင်တေဇလင်းအနေဖြင့် စင်သီတာနော့ အား လိမ်လည်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စင်သီတာနော့မှ မတ်လ(၂၀)ရက်တွင် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ စင်သီတာနော့မှ မောင်တေဇလင်းအား အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် တရားမကြီးနစ်နာမှု ၃၁၄/၂၀၁၇/ ဖြင့် တာမွေမြို့နယ်တရားရုံးတွင် ကာမလိမ်လည်မှု ပုဒ်မ(၄၁၇)ဖြင့် ဦးတိုက်လျှောက် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သိရသည်။ “ကျွန်မ ဒီပွဲလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က အခုကိုယ်ဝန် ၇လ ရှိပြီ။ ဒီ Mister ဆုကနေပြုတ်စေချင်တယ်။ကလေးရဲ့ အဖေနာမည်ခံစေချင်တယ်။ ထောင်ကျစေချင်တယ်။ […]
Posted in Articles, Asia Entertainment, Beauties & Hunkies & Couples | No Comments »
Hot News about May Htut Khaung’s Fashion
မေထွဋ်ခေါင် ကို အကယ်ဒမီပွဲတက်အတွက် ချုပ်ပေးဖို့ ပြောတဲ့ချိန် တုန်းက နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ခဲ့တာက ပွဲတက်တဲ့ ခါတိုင်းလို မဟုတ်ပဲ မေထွဋ်ခေါင်က လသားအရွယ် သားသည်မိခင်ဖြစ်နေတာက တကြောင်း မီးမီး လေးကို ပြင်ပအစာ နဲ့အခြားဖြည့်စွပ်စာ မကျွေးပဲ မိခင်နို့တမျိုးတည်း တိုက်ကျွေးနေရလို့ အိမ်မှာထားခဲ့လို့ မဖြစ်တာ ရယ် ကြောင့် အမ ရေ ပွဲတက်ဖို့အခက်ဖြစ် နေခဲ့တော့ ညီမ တော့ ပွဲကိုခနပဲတက်မယ် ပွဲစတာနဲ့ သမီးပြန်မယ် ခလေးကို ကားထဲခေါ်ထားရ ပါ့လိမ့်မယ်တဲ့ အကျီင်္ကိုလည်း သိပ်မဆန်းပဲ သမီးအခု ဝနေတာနဲ့လိုက်ဖက်အောင်သာစီစဉ်ပေးပါဆိုလို့ သူ့နဲ့လိုက်ဖက်မယ့်အရောင်ရယ် သူ နို့တိုက်လွယ်အောင် ချုပ်ပေးလိုက်တာ ပါ။ အကယ်ဒမီမတိုင်မှီ ပုံတွေရိုက်တုန်းကလည်း အကျီင်္ကအဆင်ပြေပါသေးတယ် သူ့ခမျာ နို့တိုက်မိခင်တစ်ယောက် ဖြစ်နေတော့ ပွဲမစခင်နဲ့ ပွဲစတဲ့ ထိ […]
Posted in Asia Entertainment, Beauties & Hunkies & Couples | No Comments »
“အကယ်ဒမီရင်ခုန်သံ” မနေ့ညက မီးပျက်လို့ TGIF တောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ Air con မလာလို့ ချွေးတွေသံတွေနဲ့ Gym တောင် မဆော့နိုင်။ အိမ်ပြန်ပြီး မီးအလာ Myanmar Idol လေးပဲ စောင့်ကြည့်ရတယ်။ ဒါကြီးက ရင်ခုန်စရာ မကောင်းလိုက်တာများ ကြည့်ပြီးသားရုပ်ရှင်ကြီး ပြန်ထိုင်ကြည့်နေရသလိုပဲ။ ဘယ်သူရမယ်လို့ မှန်းထားရင် မြေကြီးလက်နဲ့ပုတ်တာကမှ လွဲဦးမယ်။ ဘယ်သူဆိုတာကိုမှ နားမထောင်ဖူးဘူး။ Facebook ပေါ်က အဆင်ကြည့်ရုံနဲ့ ဗေဒင်ဟောစားလို့ရပြီ။ ကိုယ်မှမဟုတ်ဘူး။ Main stream တွေ၊ Trend တွေကို နားလည်တဲ့သူတိုင်း သည်အဆင်နဲ့သည်အဆင် ဘယ်ဖဲပဲတက်ဖို့ကျန်သလဲ ဒုံးမဝေးဘူး။ Mm Id selfie လောက်နဲ့ Facebook ပေါ်တက် ဖလန်းဖလန်းထချင်လို့ ရမလား။ ကိုယ်က သူများ […]
Posted in Articles, Asia Entertainment, Notes | No Comments »
You are currently browsing the All Things Myanmar Burmese weblog archives for March, 2017.
Asia Entertainment (1,944)
Beauties & Hunkies & Couples (988)
Fashion & Shopping (421)
Free Burma (126)
Job Vacancy & Career Day (19)
Knowledge Base (474)
Copyright © 2004-2017 shweDarling.com Myanmar Blog. All Rights Reserved. Hosted By BlueHost.